'ငါကနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရမယ်' - ငယ်ရွယ်သောသြစတြေးလျလူငယ်များသည်အွန်လိုင်းမှလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမရည်ရွယ်ဘဲထိတွေ့ခြင်း (2018) - Your Brain On Porn
Larissa Lewis က, ဂျူလီ Mooney Somers, ရေဗက္ကာ Guy, Lucy Watchirs-Smith ကများနှင့်အက်စ်ရာခေလသည် Skinner
လိင်ကျန်းမာရေး - https://doi.org/10.1071/SH17132
တင်ပြ: 1 သြဂုတ်လ 2017 လက်ခံ:9ဇန်နဝါရီ 2018 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေ 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2018
အဲဒီမှာအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏အစီရင်ခံပျံ့နှံ့အတွက်ကျယ်ပြန့်မူကွဲရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့စာပေကိုရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်မရည်ရွယ်သောထိတွေ့မှုများအကြားခွဲခြားဖို့မလေ့။ ထို့အပြင်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်ရာမှတဆင့်လမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်ရှာဖွေစူးစမ်းနည်းနည်းသုတေသနရှိသေး၏။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. အများကြီးအများပြည်သူစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိနေစဉ်, သြစတြေးလျကျောင်းသားများကိုအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေရန်အပေါ်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပညာရေးလက်ခံရရှိသည်။
အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်အသက် 14-18 နှစ်က Eleven အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးမှုများလူမှုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏ထိတွေ့ခြင်းလူငယ်များရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဤစာတမ်းတွင်တှငျကြှနျုပျတို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများလူငယ်များနှင့်ထိတွေ့နှင့်ဤထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏အမြင်များနေကြသည်၏သဘောသဘာဝကဤလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြရန်။
အာရုံစိုက်အုပ်စုများလူမှုမီဒီယာမှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့ခြင်း '' မိတ်ဆွေများက 'သို့မဟုတ်နောက်လိုက်များ၏ကွန်ရက်များမှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းပြပြီး, paid-အဘို့ကြော်ငြာ။ အကြောင်းအရာသိမ်မွေ့မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများထံမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ / ဗွီဒီယိုများအားမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ ဖော်ပြထားတဲ့ထိတွေ့လူငယ်များအများစုဟာမရည်ရွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ exposure, နေပါစေအတိုင်းအတာနှင့်ပြင်းထန်မှု, လူမှုရေးမီဒီယာကိုအသုံးတဲ့သူလူငယ်များကြားတွင်နီးပါးလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ခဲ့သည်။ အစားကကြည့်ရှုရာမှလူငယ်များတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေထက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေရန်အပေါ်လူငယ်များပညာပေးရန်ဤအချက်အလက်အသုံးချဖို့, တစ်ဦးထက်ပိုသောထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပြီး (ဥပမာ Facebook, Instagram ကို, Snapchat က, Twitter) ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။1,2 စမတ်ဖုန်းများနှင့်အင်တာနက်ကိုလွယ်ကူစွာဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးနိုင်ငံအများအပြားအတွက်နေ့စဉ်အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစေသည်။1-8 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်သြစတြေးလျကနေလေ့လာရေး 97 နှင့် 13 နှစ်အကြားအသက်အရွယ်အတွင်းရှိအထိလူငယ်များ၏အထိ 17% တော်တော်များများလူမှုရေးမီဒီယာဆိုဒ်များအနှံ့အများအပြားလူမှုမီဒီယာအချို့ကိုပုံစံပေါ်တွင်တက်ကြွဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။2,6,8 အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့သူတို့ရဲ့အဓိက social networking site များသုံးပြီးတစ်ဦးထက်ပို-တတိယအစီရင်ခံစာ။2 တစ်ဦးက 2013 စစ်တမ်းစစ်တမ်းကောက်ယူအားလုံးနီးပါးသြစတြေးလျလူငယ်များ (97 နှစ်အရွယ်မှ 14 နှစ်အရွယ်, 15- ၏ 99% အထိ 16- ၏ 17%) တစ်ဦး social networking site ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့် 62% လူမှုမီဒီယာကိုရယူသုံးဖော်ပြထား နေ့စဉ်။6
အီးယူကလေးတွေကအွန်လိုင်းစီမံကိန်းကို 14 နှစ်အရွယ်မှ 9- ၏ 16% ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာမြင်ကြပြီမှအငယ်မြီးကောင်ပေါက်ထက်လေးဆပိုများပါတယ်အဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူ, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအချို့ကိုပုံစံမြင်ခဲ့ပြီးသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။8 ဒါကြောင့်အများအားလူငယ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထွက်ရှာရမညျအကွောငျးကိုလက်ခံနေစဉ်, မကြာသေးမီစာပေဟာထိတွေ့တာမတော်တဆသို့မဟုတ် unsought အဖြစ်ခွဲခြားစေခြင်းငှါပြသထားတယ်။3,9-11 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကောက်ယူတစ်ခုမှာလေ့လာမှု 15 နှစ်အရွယ်မှ 10 နှစ်အရွယ်မှ 12- ၏ 28% နှင့် 16- ၏ 17% ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်ရှာကြံခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။12 က individualized နှင့်မကြာခဏပုဂ္ဂလိကသဘောသဘာဝမိဘများသို့မဟုတ်ကျောင်းများအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်ရဲ့နေချိန်မှာလူမှုရေးမီဒီယာ, အထူးသဖြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြင့်မားထိတွေ့ခံရဖို့လူငယ်များများအတွက်အလားအလာဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသမိုင်းမှတ်တိုင်များကွဲပြားနေစဉ်တွင်, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်လူငယ်များနှင့်အတူ concomitantly တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။4 ဒါဟာအစအများအပြားလူငယ်များတက်ကြွစွာသူတို့ရဲ့လိင်သဘာစူးစမ်းရန်စတင်မည်သည့်အခါတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။13 အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတစ်အလားအလာအန္တရာယ်ရှိသောလမ်းအတွက်လူငယ်များရဲ့အမူအကျင့်များနှင့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်း, ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏မျှော်လင့်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသည်။14,15 cross-section စစ်တမ်းများအထူးညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အကြံပြုနှင့်လျော့နည်းတိုးတက်သောကျားစံချိန်စံညွှန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအတွက်အပြောင်းအလဲပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံနှင့်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်။15-17
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့လူငယ်များရဲ့လူမှုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကြည့်ရှုရန်လူငယ်များဦးဆောင်လမ်းပြသောအမျိုးမျိုးသောလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြရန်လူမှုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏အတွေ့အကြုံများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများလူငယ်များနှင့်ထိတွေ့နေကြ၏သဘောသဘာဝနှင့်ဤအကြောင်းကို၎င်းတို့၏အမြင်များကိုစူးစမ်းလေ့လာ ထိတွေ့မှု; ထိုကဲ့သို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလူငယ်များပညာပေးနှင့်စောငျ့ရှောကျဖို့ကြားဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကြောင်းကြားရန်အရေးကြီးလှသည်။
ကျနော်တို့ဆစ်ဒနီ, New South Wales သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ, အစိုးရ (အများသုံး) ပစ်မှတ်ထားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နမူနာအသုံးပြုသောနှင့်တစ်ဦးမိတ်ဆက်အီးမေးလ်ကတဆင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ။ သုတေသီများအကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ကျောင်းပရိသကာလအတွင်းသို့မဟုတ်လူတန်းစားစဉ်အတွင်းဆရာ, ဆရာမများမှတဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုလေ့လာမှုမိတ်ဆက်ကြောင့်ကျောင်းများဖွင့်လိုက်ကြ၏။ စိတ်ဝင်စားကျောင်းသားများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်မိဘများအတွက်လေ့လာမှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်ပုံစံ်တစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်အထုပ်ကောက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့မိဘများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ထဲကနေနှုတ်သဘောတူညီခကျြမြားမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ ကျင့်ဝတ်ခွင့်ပြုချက်ပြည်နယ်ပညာရေးသုတေသနအတည်ပြုချက်များလုပ်ငန်းစဉ် (ဆက်မက်ကာသီ, Seraphine မှတဆင့်ပညာရေး NSW ဦးစီးဌာနမှရရှိသောခဲ့သည် et al။ ), အဆစ်ဒနီလူ့သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှတက္ကသိုလ်, တက္ကသိုလ် New South Wales လူ့သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကျောင်းအုပ်ကြီးထံမှ။
68-14 နှစ်ပေါင်းအသက် 18 လူငယ်များစုစုပေါင်းပါဝင်ခဲ့။ အနည်းငယ်လူငယ်များ၏ထက်ဝက် (54%) ကျော်ကအထီးခဲ့ကြသည် (စားပွဲတင် 1) ။ ကျောင်းများ (n နယူးဆောက်ဝေးလ်ပြည်နယ်၊ ဆစ်ဒနီမြို့ရှိယဉ်ကျေးမှုအရ ၄ င်းနှင့်စီးပွားရေးအရကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းများတွင်အစိုးရ (အများပိုင်) ကျောင်း၊ ရွေးချယ်သောကျောင်းတစ်ခု (ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ကျောင်းသား)၊ လွတ်လပ်သော (ပုဂ္ဂလိက) ကျောင်းနှင့်လွတ်လပ်သောဘာသာရေးကျောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျောင်း (၂) ကျောင်းသည်ယောက်ျားအားလုံးကျောင်းများဖြစ်ပြီးတစ်ကျောင်းမှာမိန်းကလေးအားလုံးကျောင်းဖြစ်သည်။ မြို့တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ဆင်ခြေဖုံးများမှကျောင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုစီးပွားနောက်ခံအမျိုးမျိုးကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဇယား ၁။ ကျောင်းအလိုက်၊ အသက်နှင့်ကျား၊ မအလိုက်အာရုံစူးစိုက်အုပ်စုများနှင့်သင်တန်းသားအရေအတွက်
ကျနော်တို့လေးယောက်အထက်တန်းကျောင်းကိုဖြတ်ပြီးမတ်လ 11 နှင့်မေလတွင် 2013 အကြား 2014 တစ်ခုတည်းကျားအာရုံစိုက်အုပ်စုများ (ခြောက်လမှရှစ်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီ) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကနေ့လယ်စာစားသို့မဟုတ်လူတန်းစားအချိန်ကာလအတွင်းကျောင်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီတည်တံ့ ~ 60 မိရာအရပျကိုယူ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံအုပ်စုသည်အတူတူပင်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းသားပါဝင်သည်။ သုတေသီများဆွေးနွေးဦးဆောင်လမ်းပြရန်သင်တန်းသားများကိုအားပေးအားမြှောက်နေစဉ်, ဖွင့်ညွန်ပြခြင်းဖြင့်အကူအညီ (စားပွဲတင် 2) နှင့်သင်တန်းသားများကိုအကျိုးစီးပွားအသစ်များကိုအကြောင်းအရာများမြှင့်ခွင့်ပြု, အုပ်စုများဂရုတစိုက်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူထံမှဟောပြောချက်ကိုဖမ်းယူနှင့်ပိုပြီးမှနျကွောငျးဝနျခံသောပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့်ကိုယ်စားပြုမှုကျော်ရှောင်ရှားရန်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ သုတေသနတိုးတက်အဖြစ်ကျနော်တို့နောက်ထပ်စုံစမ်းရေးအသစ်သောဒေသများစူးစမ်းဖို့ပေါ်ထွက်လာအချက်အလက်များနှင့်ပြုပြင်ထားသောညွန်ပြခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်လမ်းညွှန်များပြန်လည်သုံးသပ်။
ဇယား 2. အင်တာဗျူးမေးခွန်းများအကျဉ်း
ကျနော်တို့ grounded သီအိုရီအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့ဖော်ပြရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချဉ်းကပ်သုံးပြီးအုပ်စုလိုက်တွေ့ရှိချက်သုံးသပ်18 လူငယ်များရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအပေါ်ဗဟိုပြုခဲ့ကာနားလည်မှုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းပါ။ ကျနော်တို့ကူးရေးနှင့်အုပ်စုလိုက်မှတ်တမ်း၏လိုင်း-by-line ကိုနိုင်တဲ့ coding တစ်ခုကြားမှာဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုသွားမည်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းအဲဒီဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိအမြင်အသစ်ထားရှိရန်, မှတ်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောတည်ဆဲ codes တွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသင်းအဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖွဲ့များကိုဖြတ်ပြီးလုပ်ရာပုံကြမ်းများနှင့် map မှမှတ်စုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုလူမှုရေးမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူလူငယ်များ၏ရဲ့ interaction ကတစ်ဦး shared ဖော်ပြချက်များနှင့်အနက်ကိုဦးတည်သွားစေသောစာရေးဆရာများ ( L. Lewis က, JM Somers), နှစျယောကျအကြားဆွေးနွေးမှုများပါဝင်ပတ်သက်။
လူငယ်များ '' လူမှုမီဒီယာ '' တို့ကဘာကိုဆိုလိုသလဲ
social media ယေဘုယျအားဖြင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ applications များ ( 'apps များ') content တွေကိုဝေမျှနှင့် / သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ရက်ခွင့်ပြုပါရန်အသုံးပြုဆိုသည်, ဒီသုတေသန၏ထိုအချိန်ကဘုံက်ဘ်ဆိုက်များ / app များကို Facebook က, Instagram ကိုနှင့် Snapchat ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့က 'ဆိုရှယ်မီဒီယာ' 'နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းသားများကိုမေးတဲ့အခါ, သူတို့ကအများဆုံးမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောစတာတွေက Facebook, Instagram ကို, အဖြစ် social networking site များနှင့် ပတ်သက်. စကားသို့သော်အချို့လည်း YouTube နဲ့ဂီတဒေါင်းလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော။ ထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းသားများကိုလည်း၎င်းတို့၏အကောင့်အတွက် featured, မျှဝေဓါတ်ပုံများနှင့်စာသားများဖော်ပြထားရှိရာက Facebook Messenger ကို, အဖြစ် instant messaging န်ဆောင်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုအောက်ပါကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသော tools တွေကိုလူငယ်များလွှမ်းခြုံနေတဲ့ကျယ်ပြန့်အမျိုးအစားအဖြစ်ဤနေရာတွင်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ရန်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရှယ်ယာနှင့် / သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာစားသုံးကြသည်။
လူမှုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလူငယ်များရဲ့ထိတွေ့မှု၏အသိပညာအပြည့်အဝလူငယ်များ၏လူမှုမီဒီယာဆက်ဆံရေးအပေါ်ထားပါကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏လူမှုမီဒီယာ interaction ကဖြစ်ပေါ်ပုံကိုအရေးပါမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲစူးစမ်းမရနိုင်ပါ။
သင်တန်းသားများကို Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များတွင်မိတ်ဆွေများ / နောက်လိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိခြင်းအစီရင်ခံရန်အဘို့အဒါဟာအဆန်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သင်တန်းသားများကို (မိမိတို့၏အသက်အရွယ်အားလုံးမှာလူသိများခဲ့ပါတယ်လျှင်) နှစ်ဦးစလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက်အသက်ကြီးခြင်းနှင့်အငယ်ခဲ့ကြသူတွေကိုအဖြစ်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများက / နောက်လိုက်ဖော်ပြထားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းများ, မြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံများထံမှဖြစ်ခြင်း။
''ယခုတွင်ငါသည်နှစျထောငျမိတျဆှတှေရှိ ... သူတို့ထဲက .A တွေအများကြီးငါမသိရပါဘူး'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
'' ...သငျသညျအကြိုက်များပိုမိုရရှိရနိုင်ကြသည်ဒီတော့ရည်မှန်းချက် ... 1000 နောက်လိုက်ရဖို့ပါလိမ့်မယ်.... ' (မိန်းကလေး - အဆင့် ၁၁)
ပါဝင်သူရဲ့လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်များပုံမှန်အားဖွဲ့စည်း: ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်က; သူတို့ကိုလူသိများပေမယ့်အနီးကပ်စဉ်းစားမခံခဲ့ရသူတွေကို; သူတို့သို့မဟုတ် may လူတစ်ဦးအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီမည်မဟုတ်ပါသူကသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ခဲ့ကြသည်သူတွေကို; နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, လူတွေကိုသူတို့မသိကြခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
''yeah တူသောငါသည်ငါ့ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများရှိသည်မယ်လို့နှင့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ရှိသည်မယ်လို့ငါအသိရှိသည်မယ်လို့'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''တခါတရံတပါးအမျိုးသားကိုသင်ဖြည့်စွက် [တဲ့လူမှုရေးမီဒီယာ site ပေါ်တွင်တစ်ဦး '' မိတျဆှေ 'သို့မဟုတ်နောက်လိုက်အဖြစ်] သူတို့ကိုသင်သိပြီးသူဘယ်သူလဲဆိုတာမသိရင်သူတို့ဟာသူစိမ်းတွေမဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာအသိအကျွမ်းတွေပါပဲ'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအများအပြားလူငယ်များအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေ, သူတို့ဖြစ်ရိပ်မိခဲ့ကြပုံကိုလူကြိုက်များတစ်ခုညွှန်ပြချက်အဖြစ်မိတ်ဆွေများက / နောက်လိုက်များ၏အရေအတွက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများပိုမို / နောက်လိုက်သူတို့ posted အကြောင်းအရာ (ဓါတ်ပုံများ, မက်ဆေ့ခ်ျ) မှာ '' likes '' သူတို့ကပိုခံယူနိုင်ဆိုလိုသညျ။ အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ရှိခြင်း - မကြာခဏရိုးရှင်းစွာ '' likes '' ကနေတဆင့် - သူတို့ posted ဓါတ်ပုံအပေါ်အများအပြားသင်တန်းသားများအရေးကြီးသောအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
''သငျသညျမိတျဆှမြေားရာပေါင်းများစွာရှိသည်နှင့်ဒါသင်ရုံပြုပါမဟုတ်လျှင်သင်ရုံ '' likes '' မရကြဘူး'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
'' ...ပျမ်းမျှတစ်ဦးကို virtual လူကြိုက်များနဲ့တူရဲ့ ... Facebook ပေါ်မှာဓာတ်ပုံပေါ်မှာတထောအကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်… '(မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''လူတွေကလည်းအများကြီးငါဒီဓာတ်ပုံအလုံအလောက်အကြိုက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးနဲ့တူငါက delete သင့်ပါတယ်ခံစားရတယ်'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
'' ... .literally, ငါကစစ်ဆေးနေတာပါ [Facebook မှ] လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် ... ငါတနင်္ဂနွေအပေါ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆတရာတစ်ရက်လို့ပြောချင်ပါတယ်'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''ငါကြည့်ရှုရန်ရှိသည်ခံစားရတယ် [Facebook ကိုမှာ] ။ သငျသညျအိပ်ရာမသွားမီကမ္ဘာပေါ်မှာသွားဘာသိလို'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''ငါသည်ငါ့ဖုန်းကိုကြည့်ရှုငါသည်နံနက်အချိန်၌အိပ်ရာထဲက get မပြုမီကပင် Facebook ကစစ်ဆေး။ '' (Boy- အဆင့် 9)
သူတို့က, ဂီတရှာဖွေနေဗီဒီယိုကြည့်သို့မဟုတ် Instagram ကိုသို့မဟုတ်တွစ်တာသို့ logged ခဲ့ကြသည်အခါ (paid) Pop-up ကြော်ငြာမှတဆင့်သို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာဆိုဒ်များ၏ sidebar မှာကအစပြုအတွက်လူငယ်များကိုမြင်လျှင်ဖော်ပြထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအများကြီး, အမှတ်တမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်အတူကြော်ငြာဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများကနေဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုလင့်ခ်မှအကြောင်းအရာများအတွက်မရသေးသည်လည်းရှိသည်။
''(လိင်) ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, က်ဘ်ဆိုက်များချိန်းတွေ့အခါသင်သည်အစဉ်အဂီတကို download လုပ်ပါနှင့်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်သို့သွားနှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နှစ်ဖက်ချများမှာ'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးအိမ်ရှင်မမြင်သင်ဤ link ကို click နှိပ်ပြီး, နေရာတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းမြင်ရ - ပဲနေရာတိုင်း'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
ကြော်ငြာများကိုမကြာခဏပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြောင်းရှိရာအခြား site ကိုမှ link တစ်ခုပူဇော်ကြ၏။ လူငယ်များအများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်ပြီးသည်ဤကြော်ငြာကိုမြင်လျှင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
''ငါ၏အပုံပုံကိုကြည့်ပါ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ] ကြော်ငြာတွေကနေရာတိုင်းရဲ့သူတို့ပဲပေါ်လာ - က Twitter နဲ့ Instagram ကိုအပေါ်ဖြစ်ပျက်, သင်သည်ထိုရပ်တန့်နိုင်ဘူး ...'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
လူငယ်များကြော်ငြာပစ္စည်းကြည့်ရှုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါ, အမှန်ပင်အများအပြားပါဝင်သူများကဤကြော်ငြာကိုမြင်လျှင်သည့်အခါမသက်မသာ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဆိုး feeling ဖော်ပြခဲ့သည်။
''ဒါဟာတကယ်မသက်မသာင်သင်ဂီတသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို download လုပ်ပါဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ခံစားရတယ် ... နှင့်၎င်း၏ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ] ရုံဘက်မှာ'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
အခြို့သောသင်တန်းသားများကိုထိုကဲ့သို့သော Facebook နှင့် Instagram ကိုအဖြစ်ပိုမိုလေ့ဖော်ပြထားဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏ paid ကြော်ငြာများကိုမြင်လျှင်အစီရင်ခံတင်ပြသော်လည်း, အစီရင်ခံအကြောင်းအရာအများကြီးဂီတသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအတွက်တရားမဝင်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲက်ဘ်ဆိုက်များနေသော '' torrent '' က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည် ။ ဤသည်တို့ကြောင့် Facebook ကဲ့သို့သောမြင့်မားလူကြိုက်များဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များအတွက်ပေးဆောင်ကြော်ငြာနှင့် ပတ်သက်. ရာဌာန၌စည်းမျဉ်းဖြစ်နိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်အလွယ်တကူအနေနဲ့ကြော်ငြာအဖြစ်ဖော်ထုတ်နှင့်မကြာခဏနောက်ထပ်အကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်လင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်အသုံးပြုသူလိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏ကြော်ငြာများအတွက်ပေးဆောင်နေစဉ်, လူငယ်များလည်းသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာ '' Newsfeed ကို 'သို့မဟုတ်စာမျက်နှာတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမြင်တော်မူ၏။ ၎င်း၏အလွန်သဘာဝအားဖြင့်ဒီမှာလူမှုမီဒီယာ content တွေကိုမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကအကြောင်းအရာ posted သို့မဟုတ် shared ဘယ်မှာကွန်ရက်များအကြားခွဲဝေမှု၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြော်ငြာများအတွက်ပေးဆောင်နှင့်ဝသကဲ့သို့, များစွာသောလူငယ်များသူတို့မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုအများကြီးအတိအလင်းရှာမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ; အခြို့သောသင်တန်းသားများကိုသူတို့သိမွငျသောအရာကိုကိုကျော်အနည်းငယ်သာထိန်းချုပ်မှုခံစားရတယ်။
''ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏လမ်းထဲကကိုသွားစရာမလို, ကသင်တို့ဆီသို့လာဦးမည်'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''Facebook ပေါ်တွင်သင်မြင်သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်ပြီ'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''အချို့သောစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကဖွင့်ကဖွင့်တတ်၏နှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့သူကသင့်ရဲ့ Newsfeed ကိုသို့တက် pop ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပဲပေါ်လာပုံကိုနဲ့တူ bestiality တူသောအချို့တော်တော်လေးခဲယဉ်း-Core ပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ်'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
shared လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများနှင့် / သို့မဟုတ်ရွယ်တူ, နာမည်ကြီးတွေသို့မဟုတ်တကျွန်းတနိုင်ငံသားဗီဒီယိုများအားလုံးအာရုံစိုက်အုပ်စုများအတွင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုလိင်အကြံပြုချက်များထဲမှအရွယ်ရှိ - မှာမိမိတို့အဝတ်နှင့်အတူလူအဖြစ်ဝတ်လစ်စလစ်နီးပါးဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများ - လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူပုံဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအပါအဝင်, 'ညစ်ညမ်း' 'အဖြစ်ဖော်ပြသောသူတို့ကိုရန်။
''ငါတစ်ခါတစ်ရံ 18 အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုများကျော်ကဤကဲ့သို့ရှယ်ယာအထက်တွင်တစ်နှစ်နဲ့တူဤအဟောင်းများကိုယောက်ျားလေးများသကဲ့သို့ငါ၏မိတ်ဆွေအချို့မြင်ရပါတယ် ...'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
'' ... သူက Facebook ပေါ်မှာအဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံနဲ့တူပါကသူမအဝတ်အချည်းစည်းကြောင်းကအရမ်းသိသာခဲ့ပေမယ့်သူမတစ်ဦး bedsheet အောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်, ဓါတ်ပုံများ post ဖို့အသုံးပြု ...'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
'' ... အဲဒီမှာတက်လာသောညစ်ညမ်းအများကြီးဖွင့်ခြင်းနှင့်သူတို့ GIF များဟုခေါ်တွင်သောဤအမှုအရာများ ... ဓါတ်ပုံတွေကိုရွေ့လျားနဲ့တူ ... အဲဒီသူတွေကိုများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဖြောင့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းပစ္စယထွက် porn ဖြစ်ကြပြီးသင်ကနေရာတိုင်းကိုတက်ကြွလာသည်ကိုမြင်ရ ...'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
အများအပြားကသင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဟာသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာအပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသောမြင်နေစာမျက်နှာများသူတို့ကိုအဆင်မပြေသို့မဟုတ်မသက်မသာခံစားရ လုပ်. အခြေအနေကစီမံခန့်ခွဲရန်သူတို့ကိုရန်လိုအပ်ပါသည်, နှစ်ဦးစလုံးနိုင်အောင်သူတို့က content တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မလိုခဲ့ဘူးနှင့်အခြားသူများပါလျှင်မေးခွန်းများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကပြောသည် (ဥပမာမိဘများ) ကိုကြည့်ပါသင့်တယ် ပစ္စည်း။
''(သင်လူမှုမီဒီယာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတွေ့မြင်လျှင်) ... , သင်အတိတ် scroll နှင့်အခြားပစ္စည်းပစ္စယမှာကြည့်ပါ။ သင်ကစဉ်းစားကြဘူး'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''yeah, ပြီးတော့သင်ရုံဒီကနေ ... တစ်ဦးအဆင်မပြေခွအေနအေနဲ့တူကြောင့်ရဲ့လာမယ့်ဘယ်မှာများကဲ့သို့ပါပဲ ...'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''ငါ့အမေအတွက်လမ်းလျှောက်လျှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုသော့ခတ်အိမ်တံခါးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်နှင့်ကိုယ့် scrolling တယ် [Facebook မှတဆင့်] ဒါကြောင့်ပဲအဲဒီမှာအားလုံးင်'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
ထိုကဲ့သို့သော Facebook နှင့် Instagram ကိုအဖြစ်လူကြိုက်များဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များအရပ်၌ရှိ content တွေကိုစည်းမျဉ်းများရှိသည်နှင့်ကြော်ငြာအကြောင်းအရာထိန်းညှိဖို့လူသိများကြသည်; လူအစုအဝေး-စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီးအကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ကြောင်း algorithms များကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည့်အသုံးပြုသူ-generated content ကိုကျော်လျော့နည်းထိန်းချုပ်မှုရှိ၏။ အကြောင်းအရာက၎င်း၏အသုံးပြုသူများလူမှုမီဒီယာဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့သည်စေခြင်းငှါထိုသို့အကြောင်းအရာ (အားလုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးအသုံးပြုသူများသဘောတူထားတဲ့) က၎င်း၏ထုတ်ဝေအသိုင်းအဝိုင်းစံချိန်စံညွှန်းများချိုးဖောက်နှင့်ဖယ်ရှားလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင်း site ကိုမှဖွင့်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချက်ချင်းမဟုတျပါဘူး, ဤအချိန်အတွက်အကြောင်းအရာမြင်ကြနေဆဲဖြစ်ပြီး shared နိုင်ပါသည်။
မလိုလားအပ်သောအကြောင်းအရာများသည်အသုံးပြုသူများမှရရှိနိုင်ပါသည်ရေးသားသူကိုလူမှုမီဒီယာအပေါ်မိတ်ဆွေတစ်ဦး / နောက်လိုက်ဆက်မလိုက်ဘဲသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း, မဖျက်ပစ်၏ထို option ။ တချို့ကသင်တန်းသားများကိုဒီ option ကိုသတိထားဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အနည်းသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမြင်လျှင်တုံ့ပြန်၌ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
''na, ငါသင့်သိကြပေမယ့်နောက်တဖန်ငါမယ့်နှောင့်အယှက်မရနိုငျ'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''ငါတစ်နှစ် 8 တုန်းကသူငယ်ချင်းများကိုထို့နောက်ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလိုက်တယ်ယောက်ျားတွေငါ့ကိုစာပို့ခြင်းနှင့်ဝတ်လစ်စလစ်တောင်းတယ်ငါကသူတို့ကိုပိတ်ဆို့သကဲ့သို့ငါက Facebook တယ်လူတိုင်းပင်ကျပန်းလက်ခံခဲ့သည်'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများနှစ်ဦးစလုံးဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များကိုဖြတ်ပြီးအသုံးပြုသူ-generated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုမြင်လျှင်အစီရင်ခံနေစဉ်, ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာများ၏တိကျပြတ်သားအချို့ကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ မိန်းကလေးများအများဆုံးမဟုတ်ဘဲအပြည့်အဝ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုပြီးအကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာထက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်စားသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များ pose အတွက်အမျိုးသမီးများ၏ဓာတ်ပုံများဖော်ပြခဲ့သည်။
''... ငါမြင်ရဖူးဘူး [အပြည့်အဝ်ဗလာ] တစ်ဦး Instagram ကိုအပေါ်; ငါသိမြင်င့် [မိန်းကလေးများ] ရီစရာကောင်းတာကသူတို့ရဲ့ Boob တက်တွန်းအားပေး'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''... စာမျက်နှာတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည် [ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ] ကြှနျတေျာ့ကြောငျးအတှကျ, အထူးသအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများ ...'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''ငါနေဆဲ, Twitter ပေါ်တွင်ငှာကွိမျ၏အဝတ်အချည်းစည်းဓာတ်ပုံများသတိထားမိခြင်းနှင့် Tumblr သည်ပေါ်အဖြစ်ကောင်းစွာလည်းမရှိ ...'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
ပိုပြီးလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာကိုမြင်လျှင်ယောက်ျားလေးများများအတွက်အကြောင်းပြချက်မသိရသေးခဲ့ပေမယ့်ကြောင့်အကြောင်းအရာများထဲမှ-one-ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုခွဲဝေမှုအတွက်မျှဝေယောက်ျားလေးများမှဖြစ်နိုင်သည်။ အာရုံအုပ်စုများအတွက်ယောက်ျားလေးများ, အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးယောက်ျားလေးများသည်တယောက်တည်းစမတ်ဖုန်းအပေါ်တစ်ဦးဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဒါပတ်လည်အထူးသဖြင့်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေဖြင့် '' shared '' ခံရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံစာသားထဲမှာပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်, မြင်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာယောက်ျားလေးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဝေမျှဤဖော်ပြချက် '' အခြားသူများကို '' မဟုတျဘဲသင်တန်းသားများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိအဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့သည်သတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
''သူတို့ရတယ်လျှင်ငါယောက်ျားတွေအများကြီးနဲ့တူကိုသိရ [ဝတ်လစ်စလစ်] ဓါတ်ပုံတွေ [မိန်းကလေးတစ်ဦး၏] သူတို့မိတ်ဆွေများကမှသူတို့ကိုမပို့မယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့မိတ်ဆွေတွေကိုပြသမယ်လို့နှင့်တခါတရံကသူတို့ဖုန်းပေါ်မှာသွားပါနှင့်၎င်းတို့၏ဖုန်းသူတို့ကိုပေးပို့နှင့်တစ်ခါတစ်ရံကြောင့်ပင်မိတ်ဆွေတစ်မဟုတ်ပါဘူးကြောင့်ပဲသူတာဝန်မဲ့သောသူတို့ကိုမနေသောမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများကဖြစ်ပါတယ် မိတျဆှေသူဓါတ်ပုံရှိတယ်ပြောအေးမြဖြစ်ခြင်း'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''ဤသည်တနင်္ဂနွေငါအိမ်ပြန် သွား. ငါ့ကိုသူ့ကိုနှင့်ကျပန်းငှာကွိမျ ယူ. ထိုအဗီဒီယိုများအားလုံးဖေါ်ပြခြင်းငါ့မိတ်ဆွေခဲ့'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
''အကြောင်းကို 30 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းကလေးတွေနှင့်လိင်ပစ္စည်းပစ္စယအမြိုးမြိုး၏အုပ်စုတစုအဲဒီမှာဖြင့်အပေါ်ရရှိသွားတဲ့ရဲ့ ... Facebook ပေါ်မှာပုဂ္ဂလိကအုပ်စုများနှင့်တူရှိပါသည်'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
မိန်းကလေးများမိန်းကလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ခွဲဝေမှုဒီလိုမျိုးအစီရင်ခံရန်ဝေးလျော့နည်းဖွယ်ရှိယောက်ျားလေးများထက်ခဲ့ကြသည်။ အချို့သောသူတို့ကမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ambivalent ဖြစ်ခြင်းဖော်ပြထားပေမယ့်, အခြားသူများကလက်မခံနိုင်ခဲ့ကနေ disengaging ဖော်ပြထားသလိုခံစားရတယ်။ အမှန်စင်စစ်တဦးတည်းမိန်းကလေးအတိအလင်းသည်သူ၏ဟောင်းရည်းစား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမျှဝေအထီးမိတ်ဆွေရှုတ်ချခဲ့သည်။
''ကောင်းပြီတစ်စုံတစ်ဦးက [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ] ကရေးသားသော်လည်းငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုလှည့်ပတ်ကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယတို့ကိုရှောက်သွားဘယ်တော့မှနဲ့ကျွန်မလုံးဝမယ့်သူကလျစ်လျူရှုလိမ့်မယ်။ သင်ရုံလုံးဝမှတဆင့် scroll'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''Facebook နှင့်သူတို့အားအဝတ်အချည်းစည်း selfies စာမျက်နှာများကိုထွက်လာသောအခါအဘယ်သူမျှမတော့ဘူးဂရုစိုကျတယျ။ သူတို့ [Facebook မှ] ဒါကြောင့်ပိတ်ပစ်သို့မဟုတ်လူတွေလက်ခံနိုင်သောကြောင့်ပိုမိုကျယ်ပြန်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်င်နှင့်မနိဂုံးမှလာဖြစ်စေ'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''ငါကအရမ်းညစ်ပတ်ခဲ့တယ် ... မကြာသေးမီကသူတို့ဓါတ်ပုံများ၏သူတို့အားအမျိုးအစားများကိုပေးပို့မယ်လို့၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြမှသူ့ရည်းစားနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကာလအတွင်းတက်ဖဲ့ထိုဓာတ်ပုံများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့် 'ဤမိုက်မဲခွေးမှာကြည့်' 'ကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါ့ကိုဓါတ်ပုံများစေလွှတ်တော်မူသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိ'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
ကျား, မကွာခြားချက်သပိတ်မှောက်တစ်ခုမှာဧရိယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများများအတွက်အစီရင်ခံဝယ်လိုအားဖြစ်ခဲ့သည်။ Snapchat သင်တန်းသားများကို '' ဝတ်လစ်စလစ်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ '' အဖြစ်ဖော်ပြတဲ့ social networking site ဖြစ်၏ အသုံးပြုသူများသည်ကြည့်ရှုအားပေးခံရပြီးနောက်အတော်ကြာစက္ကန့်အလိုအလျှောက်ဖျက်ပစ်ကြောင်းဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပေးပို့ပါ။ တခြားဆိုက်များနှင့်ဝသကဲ့သို့အသုံးပြုသူများကြောင့်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအကြောင်းအရာရှုမြင်သို့မဟုတ်ဝေမျှနိုင်ဖြစ်ခြင်းမတိုင်မီမိတ်ဆွေတစ်သူတို့ကိုလက်ခံရာတောင်းဆိုမှုများ, ဒါမှမဟုတ်ကျဆင်းနေခံယူပေမယ့်အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးမှုများကာလအတွင်းအချို့သောမိန်းကလေးများသည်သူတို့မေးမွနျးခဲ့ဘယ်မှာကးဖော်ပြထားသို့မဟုတ်ဖို့တောင်းခဲ့သူတစ်ဦးသိတယ် Snapchat ကတဆင့်မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများမျှဝေပါ။ ဤအကးအများအပြားမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများတောင်းလူများပါဝင်သူမှအမည်မသိအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
''... နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တို့တွင်အသေချာမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို Snapchat အပေါ် ... လူများ, ကျပန်းလူတွေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများဘို့သင့်ကိုမေးပါလိမ့်မယ်ဟုပြော'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
''ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Snapchat အပေါ်ဝတ်လစ်စလစ်ပေးပို့ဖို့တောင်းခဲ့ကြသူမိန်းကလေးကိုစာရေးတံကိုငါသိ၏။ ဒါဟာ kinda ဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ရဲ့ - သင်ကပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်သင်မြင်ရဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တချို့ကျပန်းကောင်လေးကသငျသညျတောငျးဆိုနေသည်'' (မိန်းကလေး - ၉ တန်း)
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူမှုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထုတ်ရှာကြံခဲအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးမှုများစဉ်အတွင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်; သင်တန်းသားများကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၌ဤထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းအဆင်ပြေသလိုခံစားရတယ်မနိုင်ပေမယ့်။ သို့သော်အသက်ကြီးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်ယောက်ျားလေးများ, အထူးသညစ်ညမ်းတက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေအကြောင်းကိုလင်းလင်း ရှိ. , လူမှုမီဒီယာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးအလတ်စားမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
''ထိုသို့ရှာနေမယ်လိုလျှင် [လူမှုမီဒီယာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ] သင်တို့အဘို့အရှာနေလိမ့်မယ်လို့အားလုံးပူငှာကွိမျမဟုတျဘဲအဝတ်အချည်းစည်းငှာကွိမျဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးက porn ရှာခငျြတယျဆိုရငျကလူမှုမီဒီယာမှတဆင့်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တခြားနေရာတွေမှာရှိပါတယ်'' (သူငယ် - အဆင့် ၁၀)
အများအပြားကလူငယ်များ, အများအားဖြင့်မိန်းကလေးတွေ, အာရုံစိုက်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး, အကြောင်းကို သိ. သို့မဟုတ်ကလူ (ပါမယ်) Post-လိင်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအပ်လုဒ်တင်ပြီးဘယ်မှာ Instagram ကိုအပေါ် hashtag #aftersexselfie ကြည့်ရှုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့မိတ်ဆွေများထံမှအကြောင်းကိုကြားနာပြီးနောက်စပ်စုသောကြောင့်တက်ကြွစွာ hashtag ထွက်ရှာသောသူတို့၏အမျိုးအခြို့သောသူတို့ပြုကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာနည်းနည်းအသိ titillation သို့မဟုတ်အပျော်အပါးများအတွက်အကြောင်းအရာရှာကြံ၏ကဒီမှာဖြစ်ပါသည်, နှင့်အစီရင်ခံစာများကိုမကြာခဏမူလကပစ္စည်းထုတ်ပေးသူတစ်ဦးတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်။
''လူတိုင်းကအကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည် [#aftersexselfie] ဒါကြောင့်ကျွန်မကြည့်ယူချင်တယ်။ ငါကမကောင်းတဲ့င်သိကြပေမယ့် kinda, ရယ်စရာမိုပေမယ့်ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူလုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာ?'(မိန်းကလေး - အဆင့် ၁၁)
''သူတို့ပဲရင့်ကျက်အဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာချင်ပေမယ့်လေးလေးနက်နက်အဘယ်ကြောင့်သင်ဝေမျှမယ်လို့ ...... ငါကတခြားနေ့ကထိုအပို့စ်များကိုမြင်ခြင်းနှင့်တစ်နှစ်7နှင့် 8 အားလုံးကို '' ကိုယ့်ကိုငါ့ရည်းစားကိုလာလည်တာဟာနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ ''?'(မိန်းကလေး - အဆင့် ၁၁)
ဒီလေ့လာမှုကလူမှုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလူငယ်များရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး; ထိတွေ့မှုဝက်ဘ်ဆိုက် / သူတို့သုံးပြီးခဲ့ကြသည်လျှောက်လွှာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကတဆင့်သုံးစွဲသူ generated content တွေကိုမှတဆင့်ပေးဆောင်ကြော်ငြာမှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့ဤပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု 18 နှစ်အောက်အသက်လူငယ်များအထူးသလူမှုမီဒီယာမှတဆင့်မရည်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ထားတဲ့မှတဆင့်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကတွေ့ရှိချက်လူငယ်များကြုံတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအများစုမရည်ရွယ်သောခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါသူငယ်ချင်းများပိုမို / နောက်လိုက်လူငယ်တစ်လူတစ်ဦး, လူမှုရေး interaction ကအတှကျသူတို့ရှိသည်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်များစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ကွန်ရက်သည်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဝေမျှသူကိုပင်အနည်းငယ်မိတ်ဆွေများက / နောက်လိုက်ပါဝင်လျှင်, လူငယ်များပိုပြီးမကြာခဏဒီအကြောင်းအရာထိတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကကြုံတွေ့လာသောအခါသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမြင်သည့်အခါလူငယ်များခံစားခဲ့ရပုံကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကျရကြောင်း။ Wolak ကနေတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ et al။ 2007,5 ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုများစွာသောမရည်ရွယ်သောအတိုင်းဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့ဖော်ပြထား, သူတို့, စိတ်ဆိုးမသက်မသာနဲ့အဆင်မပြေခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်ရွယ်သင်တန်းသားများကိုမြင်ရလိမ့်မယ် (ဥပမာမိဘတစ်ဦး), သူတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပေါ်အတိတ်အကြောင်းအရာ scrolling ကလျစ်လျူရှု, ဒါကြောင့်တခြားမတဦးတည်းကသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲဖော်ပြခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့သတိပြုမိခဲ့ကြသည်အစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်သူတို့ကရှုမြင်ကြသည်ရှိရာလူမှုမီဒီယာ site ကိုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသတင်းပို့နိုင်ကြောင်းအနည်းငယ်လူငယ်များသူတို့ကဒီလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပွောသျောလညျး, အကြောင်း, သူတို့ကလျစ်လျူရှုရန်ကြိုးစားခဲ့မြင်ချင်ကြဘူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလူငယ်များရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Facebook ပေါ်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအစီရင်ခံ, အကြောင်းအရာသူ့ဟာသူအနီးပေါ်လာသည်နှင့်လူတစ်ဦးအစီရင်ခံ၏အသေးစိတျကိုလုံးဝလျို့ဝှက်ထားသော '' အစီရင်ခံစာ link ကို '' ကို အသုံးပြု. ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသတင်းပို့ဖို့ရှေးခယျြမပြုစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းတန်ဖိုးရှိသောမေးစရာများရှိနေပါသည်။ ပြုမူခြင်းထက်ဤအကြောင်းအရာအားလျစ်လျူရှုရန်လူငယ်များလုပ်ပိုင်ခွင့်မယ်လို့အဘယ်အရာကိုရှင်းပြဖို့နောက်ထပ်သုတေသနအဖိုးတန်ပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နောက်လိုက်ခြင်းဖြင့်မျှဝေခဲ့သည့်လူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံသို့မဟုတ် post ကိုကကမောက်ကမလူငယ်များများအတွက်နောက်ထပ် option ကို၎င်းတို့၏လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေကြောင်းလူတစ်ဦးလိုက်အောင်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ကြပြီ။ သူတို့သည်အစဉ်ဤအမှုကိုပြုသောခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့အထူးမမေးခဲ့ဘူးပေမယ့်, သာအနည်းငယ်သင်တန်းသားများကိုကောက်ကာငင်ကာမိတ်ဆွေများကိုမဖျက်ပစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးမြင့်မားသောအရေအတွက်ကစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်နာကျင်ခံစားချက်တွေကိုရှောင်ရှားရန်ရိပ်မိဖိအားပြုမူရန်ဤသိသာနှုတ်ဆိတ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေမည်။ နောက်ထပ်အနက်လူငယ်များသူတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ post အဘယ်အရာကိုထိန်းချုပ်ရှိစဉ်အခါ, သူတို့ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ post သို့မဟုတ်မျှဝေထားသောအရာကိုကျော်အနည်းငယ်သာထိန်းချုပ်မှုရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ရသောလူမှုမီဒီယာများတွင်လူငယ်များနှင့် privacy အပေါ် Marwick နှင့်ဘှိုငျဒျ (Mitchell က) ကလေ့လာမှု, ကနေလာပါတယ်။19 ဒါဟာလူငယ်များလူမှုရေးမီဒီယာ interaction ကအချို့အမျိုးအစားများကိုကျော်သို့မဟုတ်အချို့သောလူမှုမီဒီယာဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူနည်းနည်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမြင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုလူငယ်များသို့ထပ်မံသုတေသနမိတ်ဆွေများက '' လူမှုမီဒီယာ content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်မိမိတို့၏အခန်းကဏ္ဍ (ရှိပါက) တန်ဖိုးရှိသောပါလိမ့်မယ်ရိပ်မိရ။
ဒီလေ့လာမှုမှတဆင့်ထုတ်လုပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအနည်းငယ်လူငယ်များမျှဝေ (သို့မဟုတ် like နှိပ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဖော်ပြထားကြောင်းဖြစ်၏ ဒါကြောင့်တခြားလူကို ပြု. တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့လူမှုလိုလားအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ငါတို့သည်တလုံးတ-on-one အင်တာဗျူးများသို့မဟုတ်အမည်မသိစစ်တမ်းများကောက်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများကိုကြားကြပေမည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းလူငယ်များ post အဘယ်အရာကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့များသောအားဖြင့်သတိထားနှင့်တမင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသောယခင်အလုပ်ထင်ဟပ်နှင့်အွန်လိုင်းမျှဝေနိုင်ပါသည်။19,20 ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာအဟောင်းတွေယောက်ျားလေးများအစီရင်ခံစာခွဲဝေမှုနှင့်အငယ်သင်တန်းသားများနှင့်မိန်းကလေးများယေဘုယျအားမပြုသဖြင့်, သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာ feeds တွေကိုများ၏သတိထား Curation ပြင်းပြင်းထန်ထန်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုကဆစ်ဒနီ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုစီးပွားရေးကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်ဖြတ်ပြီးလူငယ်များ၏နမူနာကိုကိုယ်စားပြု, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့မြို့ပြစင်တာရှိသူတို့တက်ရောက်ခြင်းကျောင်းများမှကန့်သတ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သြစတြေးလျ၏အခြားဒေသများရှိလူငယ်များမှ generalisability ကန့်သတ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏သဘောသဘာဝကိုဖော်ပြရန်လူငယ်များကိုမေးခဲ့တယျ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြောင့်မေးခွန်းများကို / ညွန်ပြပေါ်တွင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ခြင်း, အထူးသက်တမ်းတစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါဘူး။ လူငယ်တွေကသူတို့ရှုမြင်ကြသည်သို့မဟုတ် shared အကြောင်းအရာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြပေမည်။ အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးမှုများ၏ dynamic လည်းသူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းအနေဖြင့်ကွဲပြားကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတွေကိုထုတ်ဖော်ထံမှသင်တန်းသားများကို inhibited ကြပေမည်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏မေးမြန်း၏ညှနျကွားအတွက်ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသော်လည်းဤလေ့လာမှု၏အဓိကအစွမ်းသတ္တိကို≥14နှစ်ပေါင်းအသက်လူငယ်များ၏ပါဝင်မှုကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအထိခိုက်မခံခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုမှာငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အပါအဝင်သေးယူဆရလိင်တက်ကြွကြဘူးအချို့သောလူငယ်များ၏အတွေ့အကြုံများကို၏အကွာအဝေးဖမ်းယူအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။13
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအမြင်ကျယ်လူမှုမီဒီယာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားပလက်ဖောင်း / tools တွေကိုဖြတ်ပြီးမတူကွဲပြားအလေ့အထများအစုတခုအဖြစ်လူငယ်များရဲ့လူမှုမီဒီယာ interaction ကလေ့လာစူးစမ်းဖို့လေ့လာမှု၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်နောက်လိုက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နှင့်မည်သို့အကြောင်းအရာကြည့်ရှု shared ဘယ်လို, သူတို့ content တွေကိုထိန်းညှိပုံကွဲပြားကြသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များ / applications များကိုလည်းပြောင်းလဲနေသောလယ်ကွင်းဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု - အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာစူးစမ်းရန်အဘို့အဒါဟာအဖိုးတန်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုတွင်ကျယ်စွာသဘောသဘာဝနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏လူငယ်များရဲ့မြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်၏အသိပညာပေး။ သူတို့ကလူငယ်များရဲ့လူမှုမီဒီယာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကတိုက်ရိုက်ထုတ်ဆည်းကပ်သည်မဟုတ်ပင်စဉ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ interaction ကမှဦးဆောင်မည်သို့ပိုမိုသိရှိနားလည်ခွင့်ပြုပါ။ ဤသည်လူငယ်များကိုထောကျပံ့သောသူတို့အဘို့အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်: ပညာပေးနှင့်လူငယ်လူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်သို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းကိုမပါဘူးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လူငယ်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဤအသုံးချနိုင်သူမိဘများ, မူဝါဒချမှတ်, ဆရာ, ဆရာမများနှင့် Clinician ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုမလွှဲမရှောင်သည်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်သို့မဟုတ်ထိတွေ့လူငယ်များပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရှာအံ့သောငှါဖို့ကြိုးစားမအသိအမှတျပွုကွောငျးကိုထိခိုက်မှု-အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပညာရေးချဉ်းကပ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာလူငယ်များရန်အရေးကြီးပါသည်နှင့်သေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ကိုနားလည်ခြင်းကပိုလက်တွေ့ကျဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်ပညာရေးနှင့်အသိပညာအစီအစဉ်များကိုစေ့စပ်စေနိုင်သည်။ လူငယ်များကျောင်းပြင်ပပညာရေးနှင့်မိဘများနှင့်အတူထိတွေ့မှုစီမံခန့်ခွဲရန်, မေးခွန်းများမေး၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှနှင့်မဟာဗျူဟာဆွေးနွေးရန်လုံခြုံဟုခံစားရသင့်တယ်။
စာရေးသူပညာရေး NSW ဦးစီးဌာနနှင့်ဤသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူတစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းကအသိအမှတျပွုချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့် thoughtfully နှင့်လင်းလင်းငါတို့နှင့်သြစတြေးလျ Rotary ကျန်းမာရေးနှင့် Rotary ခရိုင် 9690 ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာကသူတို့ကမ္ဘာကြီးကို shared သူလူငယ်များကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
 O'Keeffe GS, Clarke-Pearson K. ကလေးအထူးကု 2011; 127 800-4 ။
 Rideout VJ ။ လူမှုမီဒီယာ၊ လူမှုရေးဘ ၀ - ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝကိုဘယ်လိုရှုမြင်ကြသလဲ။ Common Sense မီဒီယာ၊ မှာကနေရရှိနိုင် 2012 ခုနှစ် https://www.commonsensemedia.org/research/social-media-social-life-how-teens-view-their-digital-lives [မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု 19 ဇူလိုင်လ 2017]
 Bober M၊ Livingstone S. UK ကလေးများအွန်လိုင်းတွင်သွားကြသည် - အဓိကစီမံကိန်းတွေ့ရှိချက်များနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ။ London: EU ကလေးများအွန်လိုင်း၊ ၂၀၀၅
 Steinberg L. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်သိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ 2005;969-74 ။
| adolescence.CrossRef အတွက်သိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖှံ့ဖွိုးတိုးတ |
Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D. အွန်လိုင်းလူငယ်ညစ်ညမ်းလူငယ်နမူနာများတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြည့်လိုချင်။ ဆန္ဒရှိသည်။ ကလေးအထူးကု 2007; 119 247-57 ။
| မလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များအင်တာနက်အမျိုးသားရေးနမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့လိုချင် users.CrossRef |
သြစတြေးလျဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာအာဏာပိုင်။ Like, post, share: သြစတြေးလျလူငယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အတွေ့အကြုံ။ Pyrmont, NSW - သြစတြေးလျဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာအာဏာပိုင်၊ ၂၀၁၁ ။
 Green L၊ Brady D၊ Olafsson K, Hartley J, Lumby C. အင်တာနက်ပေါ်မှသြစတြေးလျကလေးများအတွက်အန္တရာယ်များနှင့်လုံခြုံမှု - ၉-၁၆ နှစ်အရွယ် AU ကလေးအွန်လိုင်းစစ်တမ်းနှင့်သူတို့၏မိဘများ။ Sydney - Creative Industries နှင့် Innovation အတွက်ထူးချွန်သော ARC စင်တာ၊ ၂၀၁၁ ။
 Livingstone S၊ Haddon L, Görzig A, aflafsson K. အင်တာနက်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်များနှင့်လုံခြုံမှု - ဥရောပကလေးများ၏ရှုထောင့် - အပြည့်အဝတွေ့ရှိချက်များနှင့် ၂၅ နှစ်ရှိအသက် ၉ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ EU Kids Online စစ်တမ်းမှပေါ်လစီသက်ရောက်မှုများ။ နိုင်ငံများ။ London: EU ကလေးများအွန်လိုင်း၊ ၂၀၁၁ ။
Prichard J၊ Spiranovic C, Watters P, Lueg C. လူငယ်များ၊ ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံနှုန်းများ။ J ကို Am Soc အပေါ်ကသိပ္ပံ Technol 2013; 64 992-1000 ။
| လူငယ်များ, ကလေးညစ်ညမ်း, နှင့် Internet.CrossRef အပေါ်ယဉ်ကျေးမှုစံချိန်စံညွှန်း |
Livingstone S၊ Kirwil L, Ponte C, Staksrud E. သူတို့၏စကားများဖြင့် - ကလေးများအွန်လိုင်းကိုအဘယ်ကြောင့်နှောင့်ယှက်သနည်း။ EUR J ကို Community 2014; 29 271-88 ။
| ? အွန်လိုင်းကလေးများနှောင့်အယှက်အဘယ်အရာကို CrossRef: သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စကား |
Livingstone S၊ Smith PK ။ နှစ်ပတ်လည်သုတေသနသုံးသပ်ချက် - ကလေးသူငယ်များအွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာအသုံးပြုသူများကြုံတွေ့ရသောထိခိုက်မှုများ - ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လိင်နှင့်ရန်လိုသောအန္တရာယ်များကိုသဘာဝ၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ J ကိုကလေး Psychol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2014; 55 635-54 ။
| နှစ်စဉ်သုတေသနသုံးသပ်ချက်ကို: အွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာကလေးကအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြုံတွေ့ပျက်ဆီး: ဒစ်ဂျစ်တယ် age.CrossRef အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုအန္တရာယ်များ၏သဘောသဘာဝ, ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု |
 Jones LM၊ Mitchell KJ, Finkelhor D. D. လူငယ်များအင်တာနက်အကြမ်းဖက်ခံရမှုလမ်းကြောင်းများ - ၂၀၀၀-၂၀၁၀ လူငယ်အင်တာနက်အင်တာနက်လုံခြုံရေးသုံးစစ်တမ်းမှတွေ့ရှိချက်များ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2012; 50 179-86 ။
| လူငယ်အင်တာနက်သားကောင်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း: သုံးခုလူငယ်အင်တာနက်လုံခြုံရေးစစ်တမ်းများ 2000-2010.CrossRef ကနေတွေ့ရှိချက် |
သြစတြေးလျမှစမစ်အေလိင် - Rissel C၊ Richters J, Grulich A, de Visser R, Smith A. လိင် - လိင်အင်္ဂါမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပါးစပ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများ။ Aust NZJ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2003; 27 131-7 ။
| သြစတြေးလျအတွက်လိင်: adults.CrossRef ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုနမူနာအကြားအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်ပါးစပ်လိင်၏ပထမဦးဆုံးအတှေ့အကွုံမြား |
 Holloway IW, Dunlap S, Del Pino HE, Hermanstyne K, Pulsipher C, Landovitz RJ ။ အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်၊ လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အပြုအမူများ - ဆရာ ၀ န်များနှင့်သုတေသီများအတွက်စဉ်းစားခြင်း။ Curr စွဲကိုယ်စားလှယ် 2014; 1 220-8 ။
| အွန်လိုင်းလူမှုရေးကွန်ရက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အပြုအမူတွေ: Clinician နှင့် researchers.CrossRef များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား |
 ဘရောင်း JD, L'Engle KL ။ X- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလိင်မှုဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများသည်အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထင်ရှားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Community Res 2009; 36 129-51 ။
| X-rated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ media.CrossRef အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ |
Smith LW၊ Liu B၊ Degenhardt L, Richters J, Patton G, Wand H, Cross D, Hocking JS, Skinner SR, Cooper S. မီဒီယာအသစ်များမှလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသည်လူငယ်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသလား။ တစ် ဦး ကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis သည်။ လိင်ကျန်းမာရေး 2016; 13 501-15 ။
လူငယ်များအကြား Marston C၊ Lewis R. Anal heterosex နှင့်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ယူကေတွင်အရည်အသွေးရှိသောလေ့လာမှုတစ်ခု။ BMJ Open 2014; 4
| ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်လူငယ်များနှင့်သက်ရောက်မှုတွေအကြားစအို heterosex: အ UK.CrossRef အတွက်အရည်အသွေးလေ့လာမှု |
Charmaz K. အဓိပ္ပါယ်များရှာဖွေခြင်း - ခိုင်လုံသည့်သီအိုရီ။ Smith JA၊ Harre R နှင့် Van Lengenhove L တို့တွင်အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ပညာအတွက်နည်းလမ်းများပြန်လည်စဉ်းစား။ London: Sage ထုတ်ဝေမှု၊ 18 စစ။ 1996-27 ။
 Marwick AE၊ ဘွိုက်ဒီ။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ privacy - ဆယ်ကျော်သက်များသည်လူမှုရေးမီဒီယာတွင်အခြေအနေကိုမည်သို့ညှိနှိုင်းသည်။ မီဒီယာသစ် Soc 2014; 16 1051-67 ။
| networked privacy ကို: ဆယ်ကျော်သက်လူမှုရေး media.CrossRef အတွက်အခြေအနေတွင်ညှိနှိုင်းရန်ဘယ်လို |
 Byron P, Albury K, Evers C. “ Facebook ၌ရှိခြင်းသည်ထူးဆန်းသည်။ လူငယ်များသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ Reprod ကနျြးမာရေးကိစ်စ 2013; 21 35-44 ။
| "ဒါဟာ Facebook ပေါ်မှာကြောင်းရှိသည်လိုက်တယ်လိမ့်မယ်": လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမျှဝေ၏အန္တရာယ်၏လူငယ်များရဲ့အသုံးပြုမှု information.CrossRef |